Oko siza kubona kwi-Inspired 2010 -Geofumadas
Ikhaya/Microstation-Bentley/Oko esiza kubona kwi-Inspired 2010
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ndafumana isimemo sokuya kwi-Inspired 2010 eya kuba kulo nyaka izakubakho phakathi kwe-19 ne-20 ka-Okthobha. Akusayi kubakho msitho kwilizwekazi laseMelika, kuphela eYurophu, kwaye yeyiphi indawo ebhetele kuneHolland, ethi kolu hlobo lwetekhnoloji phantse ibe ngumboniso waseYurophu.
IiCadastres ezifana neSizwe soBhaliso Centre (CNR) sase-El Salvador kunye neNkqubo yoBhaliso oluManyeneyo (ISIKHONO) saseHonduras, banomsebenzi omkhulu kwezobuchwepheshe kwi-cadastre yaseDatshi.
I-ajenda iyahlula ibe yimiboniso enobungqina ngosuku lokuqala, ekwahlula ibe ngeendlela ezine zangexeshana, zonke zikhokelo lwe-12 ebizwa ngokuba yi-Bentley ngokubhekisele rhoqo:
Urhulumente (oquka iCadastre kunye noPhuhliso loLuntu)
Mines kunye ne zinyithi
Imigca yokuhambisa kunye namanethiwekhi
Iihostlela kunye nezixhobo ezizodwa
Ezokuthutha kunye nezitimela
Kuyacaca ukuba iBentley umba we-GIS yenye yezinto ezininzi abazinikezela ngomsi we-astral. Sinokubona eminye yemodeli ye-I esinokuthi siyibone ngamehlo kunyaka ophelileyo kwi-symposium yeCharlotte, ukuhlanganiswa kweprojekthi ehlakaniphile kunye ne-BIM kwifomethi ye-XFM.
Iithebula ezijikelezayo zamaThethi
Kwelinye icala, usuku lwesibini kukho iiseshoni kwizihloko ezithile. Ngokunyaniseka, imixholo ivakala ngathi sisiqingatha se-astral, kodwa yile nto kanye yenzelwe le minyhadala, ukuba iphefumlelwe apho ubuchwepheshe buhamba khona kwicandelo lobunjineli. Ngaphezulu kokuba lulwazi lobuchwephesha, licebo nobuchule, lahluke mpela kwizinto ezazisenzeka kwi-BeAwards ngaphambili kuba iBentley Institute yayibaleka ngoqeqesho olufanayo (ngoku Qhagamshelwa), baya kwazi ukuba kutheni beye kule fomethi kwaye ngokuqinisekileyo ubanika iziphumo ezingcono.
Nantsi ndifingqa ezinye ietafile apho ndibala khona injongo yakho.
IprojekthiKhetha kumaqela ahlukeneyo
Ulawulo lwemoya ye-SCADA yeeprojekthi zamanzi
Uyilo lwezakhiwo ezilungisiweyo
Qeqesha amaprojekti ngolwazi oludibeneyo
Izixeko eziMandla ngokutshaya kwe-3D
Zobunjineli kwiziseko zophuhliso
Umsebenzi usebenza kwisakhiwo sakhiwo
Iphefumlelwe i-2010 Awards
Esi siganeko siza kuvumela umcimbi wokubonga wezona zinto zilungele phambili kumsebenzi walo wesibini phantsi kwesi fomathi.
Ewe ewe. Sizokubona ngaphaya kwimpelaveki.
Juan ME Ruiz uthi:
G!, Siya kukubona ezinsukwini ezimbalwa